Zimbabwean National Anthem Song - History, Lyrics & Sheet Music
Together with the Zimbabwean flag, the national anthem of Zimbabwe is a solemn patriotic song which is officially taken by Zimbabwe as an expression of national identity.
The Zimbabwean national anthem song showcases the national ancestry of Zimbabwe and shows the patriotism, pridefulness and nationwide obligation. Along with the Zimbabwean national flag, it serves as a driver to the sensation of national pride for Zimbabwean citizens around the world.
The Zimbabwean National Anthem’s name is, “Simudzai Mureza WeZimbabwe”, and is also called “O Lift High the Banner of Zimbabwe”.
The Zimbabwean national anthem lyrics was written by Solomon Mutswairo.
The Zimbabwean song music was composed by Fred Changundega and you can view or download the Zimbabwean national anthem sheet music from the links on this page.
“Blessed be the land of Zimbabwe” was formally adopted as the national anthem of Zimbabwe in the year of 1994.
National anthem of Zimbabwe is usually played or performed during national holidays, particularly on the independence day celebrations in Zimbabwe. It is also carried out throughout cultural and other festivals in Zimbabwe, typically marking off the beginning or completion of such festivals.
National anthem of Zimbabwe is also frequently performed in worldwide sporting occasions, such as the Olympic Games as well school sport occasions.
The national anthem of Zimbabwe, like other nationwide symbols of Zimbabwe, embodies the tradition, past history, and faiths of Zimbabwe and its individuals. For this reason, it assists evoke sensations of patriotism among the Zimbabwean individuals and reminds them of their Zimbabwe’s glory, appeal, and rich heritage.
It also helps join the people of Zimbabwe by one single song or music. During the performance of the Zimbabwean national anthem, citizens of Zimbabwe, despite their ethnic distinctions, rise in unity and listen attentively or sing the song with fantastic passion.
Sports men and women from Zimbabwe also feel a fantastic minute of pride when they get a medal at a worldwide sporting occasion while Zimbabwe’s national anthem is played in the background. It gives them a feeling of having made their nation proud. Students who listen to the national anthem of Zimbabwe in schools learn to appreciate their nation and develop a feeling of unity amongst themselves.